Ampiasao ny fampiharana fampahatsiahivana sao hadino ny mamaky mailaka sasany | Avy amin'ny mac aho
Ny fampahatsiahivana ao amin'ny OS X dia rafi-pandaminana zanatany izay azo ampiasaina mihoatra ny fanoratana fotsiny fampahatsiahivana tsotra, izany hoe, azo ampiasaina koa izy io hampatsiahivana antsika hamaky na hamaly ireo mailaka sasany ao fotoana na daty manokana.
Amin'ity lesona fohy ity dia ho hitantsika ny fomba fampiasanao an'ity fampiharana ity amin'ny Mac ka ampahatsiahivo anay ny mailaka manan-danja fa tsy maintsy ataontsika ao an-tsaina ny famaliana na ny famakiana ary tsy azontsika atao amin'ny fotoana mety idiran'izy ireo izany.
Rehefa mahazo mailaka manan-danja isika, saingy sahirana isika amin'izao fotoana izao miaraka amina raharaha iray ary tsy afaka mamaly dieny izao isika fa tsy tokony hanadino ny mamaky na mamaly ny mailaka afaka mamorona fampahatsiahivana isika. Raha hametraka ity fampahatsiahivana mailaka ity dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Mihazakazaka ny mailaka mpanjifa amin'ny Mac, dia hofidintsika ilay mahaliana antsika tadidintsika ao aoriana. ary safidio ny mailaka tianao hampatsiahivina anao avy eo.
Alefaso ny fampiharana fampahatsiahivana amin'ny Mac ary avy eo dia hisintona ny mailaka amin'ny iray amin'ireo banga banga izahay amin'ny fampahatsiahivana. Ho hitantsika ny fomba nanampiana azy ary etsy ambany dia hisy ny hitsin-dàlana hanondro ny "Asehoy amin'ny mail", araka ny hitantsika amin'ny sary mifatotra.
Kitikao ny kisary «i» eo amin'ny ilany ankavanana handrindrana ny fampahatsiahivana rehefa mifanaraka tsara aminay ary safidio ny daty na ora hisehoan'ny fampahatsiahivana, na dia toerana manokana aza isika, manitsy ny hafainganana na ny laharam-pahamehana.
Dingana tsotra be izy ireo ary raha tsy mandeha ny fampahatsiahivana dia afaka ahemontsika indray izy na mamaly mivantana ny mailaka avy amin'ny Mail. Torohevitra kely tena ilaina amin'ny fotoana sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ampiasao ny fampiharana fampahatsiahivana sao hadino ny mamaky mailaka sasany
David marsinyach dia hoy izy:
Ny mampalahelo dia amin'ny Mac ihany no anaovanao azy, ary tsy ho azonao ampiasaina ny rohy mankany amin'ny mailaka avy amin'ny iOS. Iray amin'ireo zavatra antenaiko fa hiova amin'ny iOS manaraka.
Valiny tamin'i David Marsinyach
MacBook 12 "azo alaina ao amin'ilay faritra nohavaozina